नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : यो बर्षका तिजका गीतहरु यस्ता छन हेर्नुस् ! कुनै गीत अत्ती राम्रा छन भने कुनै गीत हेर्दा लाजै मान्नु पर्ने खालका छन ! तिजका गीत निकाल्नेले पहिला तिजको महत्व बुझेर मात्र निकाले कती राम्रो हुँदो हो !
यो बर्षका तिजका गीतहरु यस्ता छन हेर्नुस् ! कुनै गीत अत्ती राम्रा छन भने कुनै गीत हेर्दा लाजै मान्नु पर्ने खालका छन ! तिजका गीत निकाल्नेले पहिला तिजको महत्व बुझेर मात्र निकाले कती राम्रो हुँदो हो !
केही पुराना गीतहरु पनि हेर्नुहुन्छ कि !